Robert Mueller oo soo gaba gabeeyay baaritaankiisii ku saabsanaa dacwadii loo haystay madaxweyne Trump (dhegayso) – Radio Daljir
Robert Mueller oo soo gaba gabeeyay baaritaankiisii ku saabsanaa dacwadii loo haystay madaxweyne Trump (dhegayso)
Abriil 19, 2019 5:41 b 0
Waxaa soo dhamaaday baaritaankii uu waday Robert Mueller ee ku saabsanaa faro-gelinta Ruushka ee doorashadii Mareykanka ee 216kii.
Warbixinta ayaa madaxweyne Trump ka barri yeeleyso inuu Ruushka kala shaqeeyey faro-gelinta doorashadii Mareykanka sida uu sheegay xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka, William Barr oo Warbaahinta lahadlay wax yar uun ka hor inta aan warbixinta ladaabicin.
Hadaba warbixintan maxay uga dhigantahay madaxwene Trump iyo taageero yaashiisa? Cabdqafaar Wardheere oo falanqeya arimaha caalamka ayaa faah faahinaya.
Falanqeyn: Yeyyihiin kooxaha ku dagaalamaya Liibiya iyo dowladdaha kala taageera ? Halkeese ayay ku dambayn doontaa xaalada dalka Liibiya? (dhegayso)